China Kukosha-kuwedzerwa sevhisi sevhisi uye mumiririri | Sunson
Shambadza Wako neYedu Value-yakawedzera Serive!
1. Kuwedzera kushambadzira kuisa kuti ufadze uye chengeta vatengi vako.
2. Kudzokorora zvigadzirwa zvako mumabhokisi akagadzirwa, mune yako yaunofarira maitiro.
3. Kitting uye kuungana kunatsiridza yako yekupa cheni uye kurerutsa nzira yekugovera.
4. Lableling inonetsa asi yakakosha maitiro saka tinozvitorera iwe, uye tinoisa zvinyorwa zvakakodzera kuti tione kuoneka kwezvigadzirwa zvako.
Mumusika uyu unokurumidza kufamba, uko hupenyu hwehupenyu hwekutenderera huri kupfupika uye vatengi vane akasiyana mabrandari avanosarudza kubva, nguva-kuenda-kumusika yakakosha zvakanyanya uye ichaona kubudirira kwekambani.
Sunsonexpress Supply Chain Services (SCS) inopa ekupedzisira-kumagumo ekupa cheni masevhisi kune maOEM's (Original Equipment Vagadziri), ODM's (Original Design Vagadziri), EMS (Vagadziri veElectroni Manufacturing Service) uye vagadziri vezvinhu zvemagetsi, zvichivagonesa kukwidziridza macheni avo ekupa. .
Sekuparadzira kwepasirese, edu akapamhamakadhi emakhadhi anopa vatengi "e-imwe-yekumira-shopu" ruzivo kune kwavo dhizaini uye yekupa cheni zvido. Unyanzvi nematurusi anoshandiswa neveKetani Yekutengesa Zvinhu zvinokubvumidza kudzikisa mutengo wako wese wekuwana zvinhu, kuwedzera mari yako yekushanda asi uchinakidzwa nekuchinjika kwekuwanikwa kwezvinhu nekudaro, uchiwedzera chikamu chako chemusika uye purofiti.
Kubhadhara uye kutenga sevhisi sevhisi
Basa rekubhadhara agency
Tinogona kukupa iwe nefekitori yekubhadhara mahara sevhisi.
1688.com/Taobao.com/jd.com sevhisi yekutenga sevhisi
Isu tinobata mutengesi uye tinotaurirana nezvekutengesa panzvimbo yako
Taobao.com uye mamwe mawebhusaiti echiChinese haagamuchire PayPal! Tinokutendera iwe kutumira muripo kuburikidza nePaypal uye isu tobva tazobhadhara mutengesi tichishandisa veChinese vanopa mubhadharo! Kukupa iwe kudzivirirwa kukuru kana uchitenga kubva kuChina vatengesi!
Tichishandisa edu mazhinji makore etaooo yekutenga ruzivo, isu tinokuraira iwe maererano nezvechokwadi kwevatengesi uye mamwe maTaobao.com matipi ...
Tinogona kupa iyo yekutenga, mumiriri, kuongorora, kutumira kwepasirese kwechigadzirwa uye dhiragoni yepamusoro sevhisi sevhisi yako, Chero othe yakawedzera sevhisi yako kana iwe uchida.